अभिमत: साना पार्टीका ठूला दुःख
साना पार्टीका ठूला दुःख
चुनावी प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश राजनीतिक दल चुनावपछि गुमनाम भएका छन् । यी साना राजनीतिक दल अलपत्र छन् । ठूला दलका झैँ उनीहरूका पार्टी कार्यालय छैनन् । भएका फोनलाइन पनि बिल तिर्न नसकेका कारण काटिएका छन् । केहीका पार्टी कार्यालय पार्टी अध्यक्षनिवासमा छन् । कोही सहयोगी नभएका कारण पार्टी अध्यक्षहरू एक्लो
परेका छन् । आर्थिक अभावमा साना पार्टीहरूले ठूलो पीडा भोगेका छन् । साना पार्टीका अध्यक्षहरूका पीडा झन् चर्का छन् । कार्यकर्तालाई पैसा तिर्न नसक्दा साना पार्टीका पार्टी अध्यक्षहरू लुकेर हिँड्नुपरेको छ ।
एकताका निकै चर्चामा आएको नेपाल समता पार्टी नारायणसिंह पुनको निधनसँगै अलपत्र परेको छ । पुनपछि यसको कार्यवाहक अध्यक्षमा पासाङ गोपर्मा चुनिएका छन् । उनको पालामा त समता पार्टीको पार्टी कार्यालय नै छैन । बचेखुचेका कार्यकर्ताले पनि पार्टी छोडिसकेका छन् ।
संविधानसभाको चुनावमा १० ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष घनेन्द्रबहादुर बस्नेत यतिखेर जयबागेश्वरीमा कार्यकर्ताबाट जोगिन लुकेर बसेका छन् । अझै कार्यकर्ताले चुनावको खर्च माग्न थालेपछि उनी लुकेर बसेका हुन् । 'मलाई सबैले धोका दिए अब कसरी पार्टी चलाउने ? एक सुको छैन,' अध्यक्ष बस्नेतको दुखेसो छ । उनले आपनै निवासमा पार्टी कार्यालय सारेका छन् । पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्ने पैसा नहुँदा उनको यो बिजोग भएको हो । पार्टी कार्यालयका कुर्सी, फनिर्चरसमेत कार्यकर्ताले उठाएर लगेका थिए ।
जापानबाट आई पार्टी खोलेका ताकासी मियाहाराको नेपाल विकास पार्टीको पनि उस्तै हालत छ । कुपन्डोलको एउटा घरको सानो कोठामा यसको पार्टी कार्यालय छ, तर यसको भाडा यो रहेको घरमा रहेका ट्राभल एजेन्सी र कुरिएरले तिरिदिने गर्छन् । पार्टीका महासचिव देवेन्द्र भारती स्वयं ट्राभल एजेन्सीसँग सम्बद्ध भएकाले पार्टी कार्यालयको पार्टीले भाडा तिर्नुपर्दैन । पार्टी अध्यक्ष मियाहाराले पार्टीका लागि लगानी गर्नै छोडिदिएका छन् । पार्टी महासचिव भारती ट्राभल एजेन्सीबाट कमाएको पैसाले पार्टीको खर्च जुटाउने गरेको बताउँछन् ।
राजाको शासनकालमै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टीको घोषणा गरेका रामबाबु प्रसाईंले अहिले आप\_mनै पार्टी कार्यालयको साइनबोर्डसमेत हटाइदिएका छन् । यसअघि यस पार्टीको पार्टी कार्यालय सुकेधारामा थियो । राजाको मान्छे भनेर चिनिएका दुर्गा पोखरेल र प्रकाश कोइराला यस पार्टीमा सम्बद्ध छन् । उनीहरू पनि अहिले निष्त्रिmय छन् ।
पार्टी कार्यालयमा भेटघाटका लागि कार्यकर्ता नआइदिँदा पार्टी अध्यक्षहरू सधैँ फुर्सदमा रहने गरेका छन् । उनीहरूलाई ठूला पार्टीहरूले वास्ता गर्न छोडेका छन् । उनीहरूको दिनचर्या चुनावयता फेरिएको छ । प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोरेबहादुर खपांगीले चुनाव नभएको वेला आफू फुर्सदमा हुने बताए । जनमुक्ति पार्टी नेपालका अटलमान राईले साना पार्टीहरूलाई ठूला पार्टीहरूले वास्ता नगरकाले साना पार्टीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बताए । 'अब हामी पनि आन्दोलनमा जानुपर्छ । अनि मात्र हामीलाई अरूले वास्ता गर्नेछन्,' राईले भने । साना पार्टीहरूले गतिविधि नगर्दा उनीहरूको महत्त्व घटेको राईको भनाइ छ ।
नेपाल सुकुम्बासी पार्टी लोकतान्त्रिकको पार्टी कार्यालय शंखमूलमा रहेको छ । पार्टी कार्यालय सुकुम्बासी टोलमा भएकाले पार्टीले भाडा तिर्नुपर्दैन । सुकुम्बासी पार्टी भएकाले यसले टेलिफोनको बिल पनि तिरेन, तर टेलिकमले टेलिफोनको लाइन काटिदियो । यस पार्टीका अध्यक्ष हुकुमबहादुर लामाले सुकुम्बासी पार्टीलाई कसैले सहयोग नगरेको गुनासो गरे । 'कमसेकम सुकुम्बासी पार्टीलाई त सहयोग गर्नुपर्ने हो,' लामाले भने ।
संविधानसभाको चुनावमा सभासद्समेत रहेका विश्वेन्द्रमान पासवानले दलित जनजाति पार्टी आफ्नै निवासमा सारेका छन् । उनको निवास र पार्टी कार्यालय गौशालामा रहेको छ ।
राजाको शासनमा मन्त्री रहेका सलिमियाँ अन्सारीको समाजवादी पार्टी नेपालका दुवै फोन लाइन बिल तिर्न नसकेपछि काटिएका छन् । उनका पुत्र युनिस अन्सारी जेलमा रहेकाले अन्सारीको पार्टी राष्ट्रिय जनता दल पनि अलपत्र परेको छ ।
कुबेर शर्माको हरियाली पार्टी सुरुदेखि नै काठमाडौंको कालिकास्थानमा रहेको छ । यसका अध्यक्ष शर्मा प्रायः पार्टी कार्यालय नै टेक्दैनन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको कार्यालय तीनपटक सरिसकेको छ । सुरुमा यसको कार्यालय बानेश्वरमा थियो भने त्यसपछि चुनदेवी हुँदै अहिले बालुवाटारमा आएको छ । जनशक्ति पार्टीको पनि उस्तै हालत छ । अहिले जनशक्ति पार्टी कार्यालय अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको निवासनजिकै आएको छ । यसको खर्च अध्यक्ष थापाले बेहोर्ने गर्छन् । राप्रपाको भने आप\_mनै घर छ । त्यसकारण यस पार्टीका खासै दुःख छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र शर्माले चुनावका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्थामा र दलहरूको विषयमा विवाद भइ मुद्दा परेमा मात्र निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पार्टीहरूलाई बोलाउने गरेको जानकारी गराए । 'उनीहरू हामीसँग सम्पर्कमा नै आउँदैनन् । हामी पनि उनीहरूको खोजिनिती गर्दैनौँ,' शर्माले भने । पार्टी कार्यालयले आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गरे भने उनीहरूले आफूले परिवर्तन गरेको ठेगाना, नयाँ कार्यसमिति तथा महाधिवेशनको विषयमा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ, तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यहाँसम्म कि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउँदा दिइएको फोन नम्बरसमेत गलत दिइएका हुन्छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कार्यालयले दिएको फोन नम्बरमा डायल गर्दा बिएन्डबी अस्पालनजिक रहेको एउटा गेस्टहाउसले फोन उठाउने गर्छ ।
राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवार उठेका रामराजाप्रसाद सिंहको नवजनवादी मोर्चा पनि अलपत्र परेको छ । सिंहनिवासमा मोर्चाको पार्टी कार्यालय राखिएको थियो । अहिले सिंह काठमाडौंबाहिर छन् । त्यसकारण उनको पार्टी कार्यालय पनि अलपत्र परेको छ ।
समानुपातिक चुनावमा सिट ल्याएका नेपाली जनता दल र परिवार दल साना पार्टी भए पनि ठूलो शान देखाइरहेका छन् । परिवार दलले अनामनगरमा एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएको छ भने जनता दलले महिनामा पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर तीनवटा कोठा भाडामा लिएको छ ।
डा. असर्फी शाहको राष्ट्रिय विकास पार्टीको अवस्था पनि उस्तै छ । यसको पार्टी कार्यालय अध्यक्षको आफ्नै निवासमा सरेको छ । 'पार्टी चलाउन साह्रै दुःख भयो । कसैले पनि चन्दा र सहयोग दिँदैनन् । कसरी चलाउने पार्टी ?' साहको दुखेसो छ ।
साना पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक संकलन हो । सभासद् नभएका पार्टीमा सभासद्बाट लेबी उठ्ने कुरै भएन । साना पार्टीलाई कसैले पनि चन्दा र सहयोग दिँदैनन् । आर्थिक अभावमा साना पार्टीले कार्यालयमा कर्मचारी राखेका हुँदैनन् । कसैले कर्मचारी राखे पनि पनि तलब दिन नसकेपछि दुई-तीन महिनामै कर्मचारी पार्टी कार्यालय छोड्न बाध्य हुन्छन् ।
चुरेभावर राष्ट्रिय एकताबाट टुक्रिएका दुईवटै चुरेभावर पार्टीले दस-दस हजारमा कार्यालय भाडामा लिएका छन् । उनीहरूले दुई-दुईजना कर्मचारी पनि राखेका छन् । एउटाको कार्यालय बालाजुमा छ भने अर्काको बानेश्वरमा छ ।
मनमोहनशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको श्री राष्ट्रिय जनएकता पार्टीको पार्टी कार्यालयमा रहेको फर्निचर र कुर्सीसमेत त्यहाँका कर्मचारीले उठाएर लगेका थिए । तलब नपाएपछि उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा रहेका कुर्सी लिएर हिँडेका थिए । निर्वाचन आयोगले पार्टी कार्यालयलाई कुनै पनि प्रकारको सुविधा र सहयोग गर्ने गर्दैन ।
संविधानसभा चुनाव प्रयोजनका लागि ७४ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ५४ पार्टीले चुनावमा भाग लिए । चुनावमा भाग लिएकामध्ये नौ दल प्रत्यक्ष चुनावमा र २५ दलले समानुपातिक चुनावमा सिट ल्याएका छन् । किशोरी महतोले नेतृत्व गरेको लोककल्याणकारी जनता पार्टी प्रतिस्पर्धा खप्न नसकी पाँच महिनाअघि राप्रपा नेपालमा विलय भयो । चारवटा सद्भावना आनन्दीदेवी नामधारी पार्टीका पनि आ-आफ्नै कथाव्यथा छन् । सरिता गिरीको पार्टी कार्यालय कुपन्डोलमा रहेको छ भने गिरीलाई हटायौँ भन्दै अर्को पार्टी कार्यालय खोलेका विकास तिवारीको सद्भावना पार्टी शान्तिनगरमा रहेको छ । श्यामसुन्दर गुप्ताले आफ्नो पार्टी कार्यालय बानेश्वरमा राखेका छन् । उनले कर्मचारी पनि पालेका छन् । 'पार्टी चलाउन निकै दुःख हुँदो रहेछ, तैपनि चलाउनुपरेको छ,' गुप्ता भन्छन् ।
मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले भाडा तिर्न नसकेपछि चाबहिलमा रहेको आफ्नो पार्टी कार्यालय उठाएका छन् । उनी अहिले एककोठे नयाँ पार्टी कार्यालयको खोजीमा छन् । 'हाम्रा कर्मचारी नै हाम्रा कार्यकर्ता हुन्,' गुरुङ भन्छन् । त्यसैगरी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षले पनि भाडा तिर्न नसकेपछि आप\_mनै निवासमा पार्टी कार्यालय सारेका छन् ।
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 7:59 AM